Warbixin layaab leh oo ku saabsan dawacada oo kamid ah xayawaanada ugu aqliga badan. – Filimside.net
Xayawaanka dawacada (FOX) jaad ahaan wuxuu kamid yahay xayawaanada naasooleyda qoys ahaana eeyaha ayaa lagu tiriyaa waxayna isku jaad yiihiin Yeyda waraabaha iyo Eyga.
Dawacada waxay aad u shabahdaa wax badana u egtahay eeyaha hase yeeshee aad ayay uga lugo gaabantahay dhagaheedana waa kuwa taagan markii loo fiiriyo dhagaha eeyaha, halka dibkeedana uu dhogor badan leeyahay.
Aduunkaan guudkiisa inta la ogyahay waxaa ku nool ilaa iyo 27 nooc oo Dawaco ah waxayna ku kala noolyihiin shanta qaaradood ee aduunka hase yeeshee dawacada gaduudan waa nooc ugu caansan markii loo fiiriyo sida uu aduunka ugu faafsanyahay.
1-dawacada waxay ku soocantahay in xijmi ahaan aad u yartahay iyadoo mug ahaanteeda markii ay weyntahay ay la egtahay mugga eyga dhexdhexaadka ah wuxuuna miisaankeeda u dhaxeeyaa 6kg ill 11kg.
Dhirirk dawacada qaar kamid ah jaadadkeeda dhirikooda wuxuu gaaraa 86cm iyadoo dhirika dibkeedana u dhaxeeyo 30 ilaa 56cm.
2-dawacada nooca loo yaqaano Fennec Fox waxaa lagu tiriyaa nooca ugu yar dawacooyinka iyadoo muggooda uusan marnaba ka badneyn mugga mukulaasha (bisada) wuxuuna miisaankooda u dhaxeeyaa 1-5kg halka dhirirkiisana uu gaaro 23cm.
3-dawacada wuxuu ku noolyahay godad dhaadheer uu asiga qoto kuwaasoo qol qol u sameysan waxayna u adeegsadaan jiifka iyo hargalka ka sokow iney cuntada ku keydsadaan caruurtoodana ku ilaashadaan iyadoo gododka dawacada ku soocan yihiin iney leeyihiin dhowr albaab oo laga bixi karo iyadoo qorshaha ka dambeeyo uu yahay si ay uga baxsadaan hadii ay la kulmaan xaalad halis ah ama uu cadow soo weeraro.
4-dawacada waxay jeceshahay iney habeenkii ugaarsato maalinkiina nasato hase yeeshee qaarkood ayaa jecel in maalinkii ay ugaarsadaan waase hadii meesha ay ku noolyihiin aamin tahay oo halis badan laheyn.
5-dawacada waxay leedahay indho aad u arag dhow waxayna wax ka arkaan meel aad u fog iyo xiliga habeenkii iyadoo indhaha dawacada aad u shabahaan dhanka aragana kala simanyihiin indhaha mukulaalaha.
6-xawaaraha ugu sareeyo ee dawacada wuxuu gaaraa 72km saacadiiba waxayna isku orod yihiin oo orodka kala simantahay biciidka kaasoo lagu tiriyo xayawaanada ugu orodka badan.
7-dawacada waxay dadka iyo mukulaalaha kala simantahay iney quud ahaan u cunto hilibka iyo dalaga.
8-inta badan dawacada markii ay duurka joogto waxay noolaataa inta u dhaxeyso 2 ilaa 3 sano hase yeeshii hadii la xanaaneeyo waxay noolaan kartaa ilaa 10 sano.
9-dawacada waa noole aad iyo aad u feejigan waxayna aad uga fogaataa waxkasta oo nolosheeda halis galin karo sidoo kale kama soo ag dhawaato meelaha ay dadka ku noolyihiin sidoo kale dawacada ma gasho rabaayad oo rabaayad ahaan looma heysan karo markii laga reebo dawacada nooca loo yaqaano Fennec ee aadka u yar.
10-dawacada dhexdeeda waxay ku wada xiriiraan iney soo daayaan cod qeylo ah iyaga u gaar ah iyadoo codkii ka kooban 3 ilaa 5 jabaq uu ujeedkiisa yahay in ay kula xiriirto dawacada meel fog joogto halka codka halka jabaq ka kooban uu yahay digniin ay cadow isaga digayaan.
11-noocyada dawacooyinka ugu caansan waxaa kamid ah; Arctic Fox, Crab-eating Fox, Falkland island Fox, Hoary Fox, Bat-eared Fox, iyo Gray Fox.